Biography na akwụkwọ kacha mma nke Miguel Delibes | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Biography na akwụkwọ kacha mma nke Miguel Delibes
Berkwụ Alberto | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akwụkwọ
Weere dị ka otu n'ime nnukwu ndị edemede Spanish nke narị afọ nke XNUMX, Miguel Delibes (Valladolid, 1920) raara nnukwu akụkụ nke ndụ ya nye ọrụ guzobere na Spain mgbe agha ahụ gachara iji mee ka ụwa mata ihe nsonaazụ nke ịzụ ahịa na iwepụ ụfọdụ ụkpụrụ omume ụwa niile. Afọ asatọ ọ nwụsịrị, akwụkwọ akụkọ Delibes na-aga n'ihu na-adị ọhụrụ ma dị mkpa na ihe odide ederede juputara na egwu ya, ntụgharị uche na mmegharị egwuregwu. Ka anyị gagharịa na biography na akwụkwọ kacha mma nke Miguel Delibes.
1 Biography nke Miguel Delibes
2 Akwụkwọ kacha mma nke Miguel Delibes dere
2.1 Onyunyo nke cypress na elongated
2.3 Ise na Mario
2.4 Ndị dị ọcha dị ọcha
2.5 Onye ekwe ekwe
Biography nke Miguel Delibes
Agbụrụ nke French na Spanish, Miguel Delibes mụrụ na Valladolid ebe ọ gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị rue 1936. A nwata akara site Oge ọkọchị ha na obodo Molledo, na Cantabria, ebe nna ya tolitere ma bụrụ onye ndụ ya dị jụụ ga-akpali edemede akwukwo banyere ichu nta na okike, isiokwu abụọ na-aga n'ihu na ọrụ ya. Nbanye ya na ụwa okenye dabara na a Agha Obodo Spanish nke ahụ manyere ya ka ọ bụrụ akụkụ nke ụgbọ mmiri Mallorcan ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka ndị ọrụ afọ ofufo tupu ịlaghachi Valladolid.
N'oge ọhụụ ọhụrụ a, ọ gbalịrị gụsịrị akwụkwọ na Schoollọ Akwụkwọ nke Azụmaahịa ma mụọ Iwu, n'otu oge na ntinye aha ya na School of Arts and Crafts na Valladolid kwere ya ka ọ bụrụ goro onwe ya dị ka onye na-ese foto na 1941 maka akwụkwọ akụkọ El Norte de Castilla. N’afọ 1946, ọ butere ọrịa alụmdi na nwunye Ángeles de Castro, nke ọ kpọrọ aha n'ọtụtụ oge dị ka "mmụọ nsọ ya kasịnụ."
Mgbe emechara dị ka prọfesọ iwu, di obi ụtọ na nna nke nwa nwoke aha ya bụ Miguel, Delibes malitere ide ọrụ mbụ ya, Igwe cypress na-agbatị elu, ọrụ nke ọ natara Nadal Prize na 1947, na-agbakwụnye ọrụ nke ọrụ ndị ọzọ sochiri dị ka Still is by Day, bụ nke a nyochara mgbe e bipụtara ya na 1949, ma ọ bụ El camino, na 1952. Oge bara ụba nke dabara n'oge ọmụmụ nke ụmụ ya atọ ndị ọzọ: Ángeles, Germán na Elisa, na mgbakwunye na nhọpụta ya dị ka osote onye isi nke El Norte de Castilla.
The 50s bụ otu n'ime ndị dere ọtụtụ oge, na mbipụta nke ọrụ ndị ọzọ dị ka My arụsị nwa Sisí, The Game, Diary of a dinta (onye mmeri nke National Narrative Prize) ma ọ bụ Diary nke onye njem, akụkọ ndị dị adị nke ndị agadi . na-amalite ma ọ bụ ndị agha akara. Omumu nke nwa ha nke ise, Juan, na 1956 na nhoputa ya dika onye nduzi nke El Norte de Castilla ha ga-aka akara akara aka nke afọ iri pụrụ iche na mbido nke ga-ekwe nkwa karịa.
Ndị 60 nọchitere anya ụbọchị Delibes dị ka onye edemede, dabara na ọmụmụ ụmụ ya Adolfo na Camino. N'etiti ọrụ ya kachasị pụta ìhè anyị hụrụ Las ratas, onye mmeri nke Nrite Ndị Nkatọ ma ọ bụ, ọkachasị, Oge ise na Mario, weere akwụkwọ ya kachasị mma na nke mbụ nke mbido mgbe ọ hapụsịrị El Norte de Castilla n'ihi esemokwu dị iche iche na Manuel Fraga na ibi ndụ nwa oge na United States, ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka prọfesọ nleta na Mahadum Maryland.
Na 70s, aha Delibes onye otu Royal Spanish Academy na Hispanic Society of American, nkwupụta nke ọnwụ nwunye ya Ángeles kpatara na 1974, ihe omume nke ga-aka akara tupu na mgbe ọ gasịrị na ndụ onye edemede. Ejiri akara ngosi dị iche iche na ihe nkiri ihe nkiri nke ọrụ ya mara afọ ndị sochirinụ, ya na ihe nkiri egwuregwu nke awa ise na Mario nke Lola Herrera gosipụtara na-enwe ihe ịga nke ọma na njedebe nke 70s.
80s ga - egosi nkwado nke ọrụ ya na mbipụta nke ọrụ dịka The Holy Innocents ma ọ bụ nkwuputa dị ka onyinye Prince of Asturias. Ọrụ Delibes ghọrọ akwụkwọ edemede dị mkpa ọ bụghị naanị na Spain, kamakwa n'akụkụ nke ọzọ nke Atlantic, na-ebupụ olu onye edemede nke chi ọbụbọ ga-abata na 1998, afọ a chọpụtara na ọ na-arịa kansa eriri afọ nke ọ na-esiteghị na ya Abata iji nwetaghachi kpamkpam, nke a bụ ihe kpatara ọnwụ ya na Machị 12, 2010.
Akwụkwọ kacha mma nke Miguel Delibes dere
Onyunyo nke cypress na elongated
Onye mmeri nke Nrite Nadal na 1947, Onyunyo nke cypress na elongated na-anọchi anya ike nke oge ọgba aghara jupụtara dị ka afọ ndị sochiri agha na Spain. Ihe mmuta nke anyi mutara site n'aka onye ozo, nwa okorobịa na-enweghị nna Pedro bụ onye na-agụ akwụkwọ site n'aka onye ọjọọ Don Mateo n'obodo Ávila na-etolite n'okpuru nkwenkwe na, iji dịrị ndụ na ndụ, ọ dị mkpa ịhapụ ndị ọzọ ma gosipụtaghị mmetụta ịhụnanya ma ọ bụ obere mmetụta maka ndị ọzọ.
E bipụtara na 1962 na Ndi nrita akwukwo inye onyinye otu afọ mgbe e mesịrị,Oke bụ ihe doro anya katọrọ Latịnundundio, ma ọ bụ ọchịchọ nke ndị isi ọgaranya na-erigbu ndị buru ibu n’ógbè ahụ site n’iji ndị bi n’ógbè ahụ na-ejere ha ozi. Ọnọdụ nke nwata nwoke a maara dị ka El Nini n'akwụkwọ, nwa okorobịa onye ọ bụla na-agakwuru maka ndụmọdụ nyere ikike ya ịgụ ihe okike na ụwa na obodo nke nhụsianya jupụtara na nnukwu oghere ndị mmadụ na-eduga.
Ise na Mario
- Na-enye ihe na-enweghị atụ, Ise na Mario, nke e bipụtara na 1966, na-akọwa awa ise nwanyị ji wee lekọta ozu di ya n’otu ọnụ ụlọ dị n’elu tebụl n’akụkụ ebe a na-egosiputa Baịbụl na ọtụtụ paragraf ndị e depụtara n'okpuru ha. Ebumnuche zuru oke maka ntụgharị uche nke nwunye na-echeta ndụ ya, mmejọ ya na echiche ya na-eweta x-ray pụrụ iche nke ndụ, ọha mmadụ na ikpe na-ezighị ezi nke narị afọ XNUMX na Spain. Emegharịrị ihe nkiri ahụ maka ihe nkiri ahụ n'ọtụtụ oge wee bụrụ ihe mmụọ nsọ maka Paco León na fim ahụ Carmina y amen.
Ndị dị ọcha dị ọcha
E bipụtara na 1981, Ndị dị ọcha dị ọcha e weere otu n'ime "100 kasị mma akwụkwọ akụkọ na Spanish" site El Mundo na-eburu n'uche nnukwu ikike dị ka ọrụ na-akatọ enweghị oke mmekọrịta nke ọha na eze Spain nke narị afọ nke XNUMX. E debere na ụlọ ugbo na Extremadura, akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ nsogbu ndị ezinụlọ Régula guzobere, Paco na ụmụ ha anọ ga-eche ihu, ha niile bụ ndị ọrụ nke ndị isi nke ihe onwunwe nke na-adọta mmegbu na nlelị nke oge.
Onye ekwe ekwe
Ọrụ ikpeazụ ikpeazụ nke Delibes E bipụtara ya na 1998 ma bụrụ ụtụ doro anya nye obodo ya bụ Valladolid n'oge Carlos V, na narị afọ nke XNUMX. Oge e nyere nnwere onwe iche echiche Mgbanwe Luther Hụrụ n'anya onye ahịa Cipriano Salcedo. Akwụkwọ ọgụgụ, n'agbanyeghị agbanyeghị oge, na-agbaso otu ebumnuche ahụ dị ka ndị ọzọ nke ọtụtụ ọrụ ya: owu ọmụma, ịhụnanya na ntụgharị uche nke ndị na-anwa ịtọhapụ na ụwa etinyere.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Onye ekwe ekwe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Biography na akwụkwọ kacha mma nke Miguel Delibes
Edgar Allan Poe Biography na Akwụkwọ kacha mma
Walter Scott. Ọtụtụ mmegharị ihe nkiri nke ọrụ ya